Clock - Secret Vault: Android အတွက်ဓာတ်ပုံ APK ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် Video Video Locker ကိုကြည့်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » clock - လျှို့ဝှက်ချက် Vault: စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယို Locker
clock - လျှို့ဝှက်ချက် Vault: စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယို Locker APK ကို
clock Vault ခေါ်လျှို့ဝှက်ချက်ဓာတ်ပုံဗီဒီယို Locker စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဖုံးကွယ် & လုံခြုံသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ & သင်သည်သင်၏ဖုန်းတွင်ကြည့်ရှုဖို့တခြားသူတွေချင်ကြပါဘူးအခြားဖိုင်တွေစောင့်ရှောက်ဖို့လွယ်ကူစွာတစ်ဦးကိုအကောင်းဆုံး privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Vault ဖြစ်ပါတယ်။
ပတ်စ်ကုတ်ဒ form မှာအချိန်သုံးပြီးမီဒီယာဖိုင်တစ်ခုချင်းစီပုန်းအောင်းအဖြစ်သင့် privacy ကိုကာကွယ်ဘို့ clock Vault!
• ရုပ်ပုံများ Hide: Handily ပုဂ္ဂလိကဓာတ်ပုံကို Locker နှင့်သင်၏ပြခန်းထဲကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ Vault မှရုပ်ပုံများကိုဖုံးကွယ်။
• ဗီဒီယိုများ Hide: ချောချောမွေ့မွေ့ပုဂ္ဂလိကကိုဗီဒီယို Locker နှင့်သင်၏ပြခန်းထဲကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ Vault ရန်သင့်ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာဖုံးကွယ်။
• ခိုင်မာတဲ့ app ကိုတံခါးကျင် : သင်၏ Messenger ကို, ပြခန်း, Browser ကို, ဆက်သွယ်ရန်, အီးမေးလ်သို့မဟုတ်သင်ရွေးချယ်မည်သည့်အခြားအက်ပ်တံခါးကျင်။ သင်တို့သည်လည်းဝိုင်ဖိုင်, ဘလူးတုသ် & မကြာသေးမီတာဝန်များကိုတံခါးကျင်နိုင်ပါတယ်။
• clock Vault အိုင်ကွန်အစားထိုးမည်: ပိုကောင်းအသှငျပွောငျး Vault များအတွက် Vault Calculator ကို, ပဲဖြစ်ဖြစ်, Music Calculator ကို Lock ကို, Calculator ကို Vault စသည်တို့ကဲ့သို့အခြား icon များနှင့်သင်၏နာရီအိုင်ကွန်အစားထိုးပါ။
• မကျြလှညျ့ Locker (အတု passcode): ပံ့ပိုးမှုအတု Locker စနစ်နှင့်သင်က input ကိုအတုပတ်စ်ကုတ်ကိုမှန်ကန်ပြခန်းသော့ခတ်ကာကွယ်ပေးရန်သည့်အခါအတုအကြောင်းအရာပြသပါ။
• လက်ဗွေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး : သင့်လျှို့ဝှက်ချက်နာရီ Vault နှင့် App ကိုတံခါးကျင်လက်ဗွေ Unlock ရန်သင့်လက်ဗွေရာကိုသုံးနိုင်သည်။
• Break-အတွက်အချက်ပေး: သင်ရန်သင့်အားနောက်ကွယ်မှ app များကိုသော့ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်သူမည်သူမဆို၏ selfie တစ်လျှပ်တစ်ပြက်နှင့်မေးလ် Capture ။ သင်တို့သည်လည်းပြခန်း Vault အတွင်းပိုင်းကနေ snooper ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပါ & ကယ်တင်နိုင်ပါ။
• ဗီဒီယို Player ကို: ဗီဒီယို Vault အတွင်းပိုင်းဗီဒီယိုများစောင့်ကြည့်ဖို့စူပါဖယ်ရှားရာမှာဗီဒီယို player ကို။
• ကြော့ဒီဇိုင်း: ချောမွေ့လှပအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကို။
• လွယ်ကူသော Navigation: သင်အလွယ်တကူလက်ျာ left အစွန်းကနေပွတ်ဆွဲခြင်းဖြင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုနာရီ Vault အတွင်းပိုင်းကနေမျက်နှာပြင် back မှသွားလာလို့ရပါတယ်။
- ကလေးတွေသို့မဟုတ်သူစိမ်းများကဖြုတ်ခံရခြင်းမှနာရီ Vault ကအကာအကွယ်ပေးတယ်။
စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Lock ကိုအသုံးပြုနည်းဘယ်လိုနေသလဲ?
1: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Vault နာရီစတင်ရန်နှင့်နာရီအလယ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
2: နာရီနှင့်မိနစ်, ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားကအလိုရှိသောအချိန်ပတ်စ်ကုတ် Set နှင့် clock ၏အလယ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
3: အခုအတည်ပြုဖို့ passcode ကိုပြန်လုပ်ပါ။
အရေးကြီး: မဟုတ်ရင်ကြောင့်အစဉ်အမြဲရှုံးနိမ့်လိမ့်မည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖိုင်များကိုပြန်လည်မတိုင်မီဒီ app ကို uninstall မထားပါနဲ့။
Vault app ကိုစက်ပစ္စည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွင့်ပြုချက်ကိုအသုံးပြုသည် Watch ။
Vault app ကိုအသုံးပြုနိုင်မှုန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသည် Watch ။
ကျွန်မနာရီ Vault မှငါ့ဓါတ်ပုံ / ဗီဒီယိုကိုပြန်ယူလို့ရပါသလား?
ဟုတ်ကဲ့, သင်သည်သင်၏ဖုန်းကိုပြခန်းအတွက် back ချင် & ကြောင့်ထားတဲ့ဗွီဒီယိုသို့မဟုတ်ဓါတ်ပုံကိုအပေါ်ရုံရှည်လျားစာနယ်ဇင်းကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ်, ပြီးတော့ topbar မျက်စိ icon ပေါ်တွင်ထိပုတ်ပါနှင့်ပြန်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုပြခန်းမှလာကြလိမ့်မည်။ သငျသညျလွန်းသောမိုဃ်းတိမ်ကနေလည်းကဗီဒီယိုကို download လုပ်နိုင်ဒီနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဒေသခံနဲ့ cloud ။
app ကို uninstall လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ထိပ်ဆုံးဘားတန်း setting icon ပေါ်တွင်ထိပုတ်ပါနဲ့ app option ကို uninstall မတော်တဆကာကွယ်ဆေးပယ်ထားကြ၏။ ဖျက်မှုမတိုင်မီဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေကိုအထက်ဖတ်ရှုပါ။
ပတ်စ်ကုတ် recover လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
လက်ပတ်နာရီအတွက် 10: အချိန် 10 ထားကြ၏။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကရည်မှန်းချက်အပြည့်အဝသီးသန့်လုံခြုံရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ပါဆုံးအဆင့်မြင့်ဝှက်ရုပ်ပုံသည်နှင့်သင့် privacy ကိုဘေးကင်းလုံခြုံစောင့်ရှောက်ရန်ဗီဒီယို app ကို Hide!
+ စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှု ..
ကိုသတိရပါ: သင်သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုမေ့ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်ဟာ 10 သတ်မှတ်ထားနိုင်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာရီအတွက် 10 အချိန်နှင့်စာနယ်ဇင်း Center ကခလုတ်ကိုစကားဝှက်ကိုပြန်လည်နာလန်ထူမှုအတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်။ ဒါ့အပြင်ဒီ app ၏ Uninstall ကိုမရောက်မီအများပြည်သူပြခန်းအားလုံးကိုဝှက်ထားသောဖိုင်များကိုရွှေ့သတိရပါ။ System ကိုဖြုတ်တဲ့အခါမှာ app ကိုအတွင်းအပြင်ဒေတာများကိုရှင်းလင်းသို့မဟုတ်လုံခြုံရေးအတွက်တိမ်တိုက် option ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။
https://www.youtube.com/watch?v=ELTAUIDZQlY အတွက်နောက်ဆက်တွဲခြေလှမ်းများ uninstall လုပ်ဖို့ဘယ်လို
clock - လျှို့ဝှက်ချက် Vault: စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယို Locker
6.47 ကို MB
ပြခန်း Vault ™ - Hide ရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ
နာရီ - အ Vault ...
Calculator ကို - ...